(Los Angeles) — Steemit
တစ်ဦးကိုယခင် Playboy မော်ဒယ်လ်သူတို့လိင်ရှိခဲ့ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အပြီးသူမ၏ပိုက်ဆံကမ်းလှမ်းယျတျောနှငျ့အတူစတင်ခဲ့ကြောင်းသူမကနိုင်ငံတော်သမ္မတ Donald Trump နှင့်အတူရှိခဲ့မလုပ်ပဲ 10 လကိစ္စများအတွက်ပထမဦးဆုံးအမျိုးသမီး Melania Trump တောင်းပန်စကားပြောကြားခဲ့သည်။
ကြာသပတေးနေ့ညဥ့်ထုတ်လွှင့်ကြောင်းက CNN ရဲ့ Anderson က Cooper ကနှင့်အင်တာဗျူးတွင်စဉ်အတွင်းကရင် McDougal Trump 2006 ခုနှစ်တွင် Beverly Hills မှာဟိုတယ်မှာဘန်ဂလိုမှာသူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ tryst ပြီးနောက်သူမ၏ဆပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကဆိုသည်။
ကျနော်တို့ရင်းနှီးခဲ့ပြီးနောက် "ကောင်းပြီ, သူသူသည်ငါ့ကိုဆပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ ထိုအခါငါတကယ်ယူဖို့ဘယ်လိုမသိခဲ့ပါ "ဟုသူမကဆိုသည်။ "ဒါပေမဲ့ကျွန်မသူ့ကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ငါကလည်း, '' ဒါကငါ့ကိုမဟုတ်ပါဘူး။ ငါကမိန်းကလေးမျိုးမဟုတ်ဘူး။ ' "
သူမသည်နေအိမ်လမ်းကိုအပေါ်ကိုအျောဟစျသူသည်နောက်တဖန်ကိုယ်တော်ကိုတွေ့မြင်ရလိမ့်မည်ဟုထင်ပေမယ့်သူကသူမ၏နောက်ကျောကိုခေါ်ပြီးနောက်သူနှင့်အတူအခြားအရက်စွဲများအပေါ်သွားကြဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြဘူး, သူကဆိုသည်။ McDougal ထပ်တလဲလဲ "အလွန်ချစ်စရာကောင်း" နှင့်အမျှ Trump ဖော်ပြထား "ချိုမြိန်။ "
McDougal သူမကအပြစ်ရှိသလိုခံစားရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူမနဲ့ပတ်သက်တဲ့ 10 လကြာ Trump နှင့်ဆက်ဆံရေးဆက်လက်ဧပြီ 2007 ခုနှစ်တွင်ကချွတ်ချိုးဖဲ့ကပြောပါတယ်။ သူမသည်နယူးယော့ခ်ရှိသူ၏ဂုဏ်သတ္တိများမှာ Trump, နယူးဂျာစီနဲ့ကယ်လီဖိုးနီးယားတွေ့ဆုံရန်ခရီးသွားလာပြန်ပြောပြနှင့်သူမသူနှင့်အတူလိင်ခဲ့ "ဟုအကြိမ်အတော်များများများစွာ။ "
McDougal Trump များအတွက်ခံစားချက်တွေကိုခဲ့ပေမယ့်ကိစ္စပါ "ပဲငါ့ကိုဆိတ်ကွယ်ရာဖြတ်" ဟုသူမကဆိုသည်။
"အဲဒီမှာတကယ့်ကြားဆက်ဆံရေးရှိခဲ့သည်။ စစ်မှန်သောခံစားချက်တွေကိုရှိခဲ့သည် "ဟုသူမကဆိုသည်။ "သူကကလေးငါ့ကိုခေါ်လိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်သူအဆင်းလှကကရင်ငါ့ကိုခေါ်လိမ့်မယ်။ "
Trump 2005 ခုနှစ်, သူ့ကိုလက်ရှိဇနီး, Melania Trump လက်ထပ်နှင့်၎င်းတို့၏သား, Barron 2006 ခုနှစ်တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။
ဆက်ဆံရေးနှင့် ပတ်သက်. သူမ၏သာအင်တာဗျူးပါလိမ့်မယ်သူမ၏ရှေ့နေကပြောပါတယ်သည့် - - CNN ကစကားပြောသူမက Melania Trump ဖို့ပြောလိမ့်မယ်အဘယ်အရာကိုမေးမွနျးခဲ့ကွသညျ့အခါ McDougal တောင်းပန်ခဲ့သည်။
"သင်မှတစ်ပါးအဘယ်သို့ပြောနိုင်ပါသည်, ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး?" McDougal ကဆိုသည်။ "ကိုယ်စိတ်မကောင်းပါဘူး။ ငါကငါ့ကိုပြုချင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ "
McDougal သူမရဲ့ကြားဆက်ဆံရေးကိုဆွေးနွေးချင်ခဲ့တယ်နှင့်အကြိမ်ကြိမ်စွပ်စွဲကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီးသတင်းထောက်များကိုကနေမေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များငြင်းပယ်ဘယ်တော့မှကဆိုသည်။ ဇာတ်လမ်းအများပြည်သူဖြစ်လာခဲ့သည်ပြီးနောက်ဒါပေမယ့်သူမထွက်ရဖြစ်ပျက်၏သူမ၏ဘေးထွက်ပြောပြရန်လိုသူကဆိုသည်။
အိမ်ဖြူတော် Trump McDougal နှင့်အတူဇာတ်ခင်းရှိခြင်းနှင့်ချက်ချင်းအင်တာဗျူးကြာသပတေးနေ့ညဥ့်အကြောင်းကိုမှတ်ချက်ပေးရန်တောင်းဆိုချက်ကိုတုံ့ပြန်ခဲ့ပါဘူးငြင်းဆိုပြောကြားခဲ့သည်။
အင်္ဂါနေ့တွင်, သူမကတစ်ဦးကိစ္စ၏သူမ၏ဇာတ်လမ်းဖို့အခွင့်အရေးအတွက်သမ္မတမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကာလအတွင်းသူမ၏ $ 150,000 ပေးဆောင်ပေမယ့်ဘယ်တော့မှဇာတ်လမ်းအထဲသို့ပြေး ဝင်. ဆိုပါတယ်သောစူပါမားကတ်သတင်းစာအမျိုးသား Enquirer, ပိုင်ဆိုင်ကြောင်းကုမ္ပဏီဆန့်ကျင် Los Angeles မြို့မှာရှိတဲ့တရားစွဲဆို။
စာချုပ် invalidate မှတရားသူကြီးတစ်ဦးကမေးတယ်ရာ McDougal ရဲ့တရားစွဲဆိုမှု, Trump ၏ရှေ့နေမိုက်ကယ် Cohen ကို, ထိုသတင်းစာရဲ့မိဘကုမ္ပဏီ, အမေရိကန်မီဒီယာ, Inc နှင့်အတူသူမ၏ဆွေးနွေးမှုများအတွက်လျှို့ဝှက်စွာပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ကြောင်းစွပ်စွဲ
အဆိုပါကုမ္ပဏီ McDougal 2016 ကတည်းကသူမ၏ကြားဆက်ဆံရေးနှင့် ပတ်သက်. ပြောဆိုရန်ခွင့်ပြုထားပြီးနှင့်စာချုပ်သူတို့ကိုဇာတ်လမ်းထုတ်ဝေခြင်းရှိမရှိကျော်သမ္မာသတိပေးသောပြောပါတယ်။